आफू मात्रै चुस्ने, मोटाउने र डकार्ने जनतालाई म'रे पनि म'र भन्नेलाई म मेरो सरकार कसरी भनूँ ? - Rising Dainik
आफू मात्रै चुस्ने, मोटाउने र डकार्ने जनतालाई म’रे पनि म’र भन्नेलाई म मेरो सरकार कसरी भनूँ ?
October 20, 2020 BANDANA KHADKALeaveaComment on आफू मात्रै चुस्ने, मोटाउने र डकार्ने जनतालाई म’रे पनि म’र भन्नेलाई म मेरो सरकार कसरी भनूँ ?
सिङ्गो विश्व, देश र जनता महामारीसँग जुध्दै गर्दा तपाईंहरू पार्टी फुटाउने अध्यादेशदेखि सांसद अ’पहरण र आफ्नै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन व्यस्त देखिनुभो – जनताले हात उठाएनन् ।
-करोड़पति ओलीले उपचारका लागि राज्यबाट बारम्बार करोडौं रुपियाँ लिनुभो – जनताले हात उठाएनन् !-सर्प पाल्ने नाममा झलनाथ खनालले नगरपालिकादेखि केन्द्र सरकारसम्मबाट बारम्बार करोडौं रुपियाँ लिँदै आउनुभएको छ- जनताले हात उठाएका छैनन् ।
-विदेशी माटोमा अलपत्र मजदुरलाई बीस हजारको हवाइ भाड़ा सत्तरी हजारमा बेचियो, कवारेन्टीनको नाममा होटेलसँग कमिशनको डिल भयो र ती निमुखाको रगत चुस्ने काम भयो । अझै पनि कति धेरै नागरिक बेख़र्ची भएर अलपत्र छन् – खै कतै कसैले हात उठाएका छैनन् ।सेनाको नाम बेचेर ओम्नीकै सामान ल्याइएपछि सेना मेडिकल सामग्री आयातबाट पछि हट्न बाध्य भयो । अरबौं ख़र्चेर ल्याइएका सामग्री नक्कली निस्किए । रक्षामन्त्री नै फेर्नुपर्ने अवस्था आयो – तर पनि जनताको हात उठेको छैन ।
आज आएर कसरी अचानक तिम्रो मात्र हात उठ्यो ? महामा’री व्यक्तिगत समस्या होइन । यो देशको जिम्मेबारी हो । चरम पूँजीवादी देशले समेत हात उठाउन सकेका छैनन् भने आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने तिम्रो हात एक्कासि कसरी उठ्यो ?
राजश्वले धानेन भनेर मन्त्री, सांसद, सल्लाहकार या कर्मचारीको सङ्ख्या घटेको छैन । तिनको तलबभत्ता, तामझाम र भ्र’ष्टाचार घटेको छैन । भूकम्प गए सबैभन्दा पहिले त्रिपाल तिनैले पाउँछन्, कोभिड़मा हप्तामैं दुई पल्ट तिनले पिसीआर गर्न पाउँछन् । भान्जाभान्जीलाई जागीर चाहिए तत्काल नयाँ आयोग बन्छ, नियुक्ति हुन्छ ।
आफू मात्रै चुस्ने, मोटाउने र डकार्ने तर आम जनताको जीवनमरणको सवाल आउँदा हात उठाउने तिमीलाई म मेरो सरकार कसरी भनूँ ? तिम्रा ओम्नीदेखि यति ग्रुपसम्म पाल्नकै लागि मैले पेट का’टेर कर किन तिरूँ ?
असई गोविन्द विकको यसरि ग’एको थियो ज्या’न ! खुल्यो यतिठुलो र’हस्य –
October 17, 2020 BANDANA KHADKA
बसन्तपुरको दशैंघरमा यसरी छरियो जमरा